‘हुरी चल्यो’ पछि केशव आचार्यले ल्याए ‘मलाई रोमान्स भो’ (भिडियो), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
‘हुरी चल्यो’ पछि केशव आचार्यले ल्याए ‘मलाई रोमान्स भो’ (भिडियो)
भर्जीनिया। नेपाली गीत संगीत श्रेत्रमा फरक फरक शैलीका गीत संगीतहरू आउने क्रममा अमेरिकाको भर्जिनियामा रहेका केशव आचार्यले तन्नेरी युवा युवतीलाई नचाउने खालको गीत सार्वजनिक गरेका छन्।
मलाई रोमान्स भो बोलको गीत हालै युबट्युबबाट सार्वजनिक भएको छ । दुई दशक नेपालमा पत्रकारिता पेशा अंगालेका आचार्य अमेरिका छिरे पछि लामो समय हराएका थिए ।
अब भने आफ्नो गास, बास जुटाउन काममा दौडिन त्यति नपर्ने, फुर्सदिलो भएकाले आफू संग भएको ज्ञान र सिपको प्रयोग गर्दै नियमित म्युजिक भिडियो, डकुमेन्ट्री लगायतका सामग्रीहरू लिएर आउन लागेको बताए । प्रोडक्सन म्यानेजर आचार्यले चर्चित गीत ‘हुरी चल्यो १६ बर्षे वैंशको गत हप्ता बजारमा ल्याएका थिए ।
हप्ता दिन नपुग्दै पुन ‘मलाई रोमान्स भो’ गीत ल्याएका हुन् । प्रिज्मा स्टुडियो काठमाडौंमा रेकर्ड गरिएको गीतमा शेरबहादुर डागीको श्वर, शब्द र संगीत रहेको छ । चर्चित मोडेल जुना आले र एकान्त मगरले अभिनय गरेको म्युजिक भिडियो फोटोग्राफर सनी सुनुवारले खिचेको हुन् ।